SHEEGGA TARANKA VISLOBRYUHAYA VIETNAMESE - XOOLAHA
Doofaarka maanta waa kuwa ugu caansan iyo kuwa caanka ah.
Maxay tahay sababta? Haddii aad doofaarro ku dhalatay, markaa waxaad leedahay baruur, hilib, taas oo aan dhab ahaan ahayn mid aan shisheeye ahayn badankeeda aadanaha.
Iyada oo dhan tan doofaarka, waxaad kaloo kasban kartaa.
Laakiin, ka hor inta aadan go'aan ka gaarin tallaabada doofaarrooyinka taranka, waxaa jira had iyo jeer su'aasha hadalka: taas oo ku habboon in ay doortaan?
Khariidad cusub, oo ah mid ka mid ah doofaarka fiyuusiga ah ee Vietnamese-ku-dillaacday ayaa ka muuqday dhulka ku yaala CIS.
Si deg-deg ah oo caleenta ah ayaa laga helay hoyga "sharaf leh" ee beeraha iyo beeraha gaarka loo leeyahay.
Intaa ka dib waxaan furi doonaa dhammaan siraha ee caan ka mid ah doofaarradan.
Waxaan iibsanaa doofaarro caafimaad leh oo qurux badan iyo doofaarro leh ama shuruucda aasaasiga ah ee doorashada
Haddii aad horay u go'aansatay inaad noqoto milkiilaha doofaaradan, kadibna waxaad u baahan tahay inaad ogaatid sharciyada aasaasiga ah ee xulashada iyo iibsiga. Sababtoo ah, boqolkiiba ugu weyn ee faa'iidooyinka kalluunka vietnamiyada ee ka soo baxa doofaarka waxay kuxirantahay doorashada saxda ah ee dadka caafimaadka leh.
Haddii aad weli qorsheyneyso in aad iyaga ku soo jiidato qabiil, ka dibna dhammaan macluumaadka dheeraadka ah ayaa noqon doona kuwo waxtarka leh:
Iibsashada doofaarka ee qabiilka, ha ka iibsato mid ka mid ah breeder, iyo xataa ka badan si ay kuwa doofaarka ah ee u muuqday in hal qashin ah.
Marka aad soo iibsato doofaarro, weydii dhirta inta uu beerto uu leeyahay. Haddii uu haysto dhammaan doomaha digaaga, markaa inta badan, farcanka ayaa noqon doona qaraabo. Iyo tan faracadan, sida aad ogtahay, helitaanka caafimaad leh, oo buuxa, caruurtu waxay ku dhow yihiin wax aan macquul aheyn.
Weydii da'da iyo miisaanka doofaarka, oo ku saabsan miisaanka qiyaasta ee doofaarka uu ku dhashay. Waxaad sidoo kale weydiisan kartaa beeraha si ay u sheegaan socodka koritaanka doofaarka, iyada oo ay socoto mudo ah 10 maalmood.
Waxaad xaqiijin kartaa xaqiiqada macluumaadka ay bixiso iibiyaha adoo arkaya abuurista. Haddii digaaggu ay yihiin hal bil, waa in dhirta ay tahay inay leeyihiin lakabyo caan ah. Waa inay noqoto mid khafiif ah.
Haddii caleenta horteeda kuugu muuqato daal, ka dibna ay u badan tahay in doofaarku uu ka badan yahay bil bilaha ah, ama ma aha abuur ah oo u dhashay oo doofaarka lagu siiyay.
Si taxaddar leh u fiiri muuqaalka xayawaanka. Haddii uu doofaarku caafimaad qabo, ka dib muruqyaduna si fiican ayey u kobcaan, lugahoodu waa kuwo adag oo kala duwan. Calaamad cad oo ku saabsan caanaha vislobrew ee Vietnamese waa dhaleeceyn badan oo lafaha sanka ah.
Qofka caafimaadka qaba, dastuurku waa cufan, jilbaha, indhaha waa mid aad u iftiimaya, xitaa jaakad. Raashin wanaagsan ayaa sidoo kale calaamad u ah caafimaadka shakhsi ahaaneed. Waa in la ogaadaa in midabka dukaamada mid ka mid ah qashinka uu ka duwanaan karo, laga bilaabo cadaan ilaa madow.
Waa inaadan iibsan doofaarka haddii jidhkiisu uu leeyahay qaab isku mid ah, madax dheer, iyo lugaha ayaa lagu qoray foomka "X". Aragtidani waxay soo jeedinaysaa in qofkani uu jiran yahay, ama haddii kale waxaa jira nidaam ka sii daraya taas oo ka dhalatay isgoyska waalidka qaraabada.
Dareemayaasha qallalan ee ka badan laba iyo toban xayawaan ayaa daciif noqon kara.
Haddii aad horey u sameysay doorashadaada, ha ilaawin inaad weydiiso iibiyaha nooca cuntada uu isticmaalay. Tan iyo marxalad adag oo loo maro cunto kale waxay keeni kartaa xanuunka xayawaanka.
Faahfaahin faahfaahsan ee taranka, dhammaan qarsoodiga caan ah
Magacyadoodu waxay la xidhiidhaan weyn calooshataas oo si gaar ah u soo jiidata. Lugaha ayaa aad u gaaban oo caloosha ku taaban karo dhulka. Dhaleeceyntu waxay u egtahay mid ka mid ah laaluushka badan, halkii sanka doofaarka.
Waxyaabaha qajaarka ah waxaa laga yaabaa inay isku mid noqdaan xargaha boobka. Doofaarka visifubury ee Vietnam wuxuu noqon karaa caddaan iyo madow. Waxaa jira shakhsiyado isku dhafan midabada midabka midabka ah waxayna leeyihiin maro marmar ah.
Doofaarka visifubury ee Vietnam waxay muddo dheer joogsadeen si ay u noqdaan xayawaannada qunyar socodka ah. Kordhay, beeralayda xirfadleyda ah, ganacsatada, waxay sidoo kale joojiyaan doorashadooda ku saabsan caanahan.
Doofaarkan si wanaagsan ayaa u awooday inay si firfircoon u korodhaan miisaanka iyo koritaanka shanta sano ee ugu horeeya, markaa geedi socodkani si tartiib ah ayuu u sii socdaa, si tartiib tartiib ah u joojin. Miisaanka doofaarka vislobrew ee sannadka sannadka ah wuxuu gaaraa 80 kiiloogaraam. Suuqyada xayawaanka waxay meteli karaan doofaarro leh miisaankoodu yahay ilaa 100 kiilo.
Faa'iidooyinka lagu hayo dhalashada Vietnamese ee aragtida doofaarka la jabiyay, marka la barbardhigo nuucyada caadiga ah
Hilibka leh xaddiga ugu yar ee dufanka iyo tamar la'aanta buuxda. Hilibkan waxaa isticmaali kara dadka qaba cudurrada wadnaha, maxaa yeelay heerka heerka kolestaroolka ku jira waa mid aad u yar. Qalabka waxtarka leh waxaa lagu xafidaa dhammaan noocyada daaweynta kuleylka.
Dareemo, dabeecad isku dheelitiran Xidhiidhka doofaarkan ayaa la mid ah xidhiidhada eeyaha marka loo eego doofaarrada caadiga ah ee caadiga ah. Ma qaylinayaan maalintii oo dhan, ha jebin albaabka.
Sow maaha gardarrada mulkiilaha ama dukaamada. Xaaladaha aan la garanayn ee kalluunka ayaa cunaya carruurteeda. Horumarka doofaarka iyaga oo leh iyaga ayaa ah ugu yaraan raaxo iyo farxad ugu badnaan.
Cunuggu waa inuu ku faraxsan yahay. Qiyaastii saddex qaybood oo cunto ah halkii kiilo oo korodh miisaanka. Isla mar ahaantaana, qiyaastii 80% nafaqada guud, markaad nuugeyso, waxay noqon kartaa cunto casiir leh, cagaaran. Oo waa keliya shan qaybood oo sarreen ah.
Nadaafad gaar ah. Doofaarada caanahan ayaa ah mid caan ah si loo kala saaro "musqusha" ka soo "qol jiif". Tani, marka hore, si fudud u fududaynaya nadiifinta, iyo labaadna - waxay ka dhigaysaa doofaarka iyada oo aan urta 'udgoon' udgoon 'udgoon'.
Dhaqaaqa jinsiga ah ee doofaarka dufanku ku yar yahay vietnam wuxuu bilaabmaa seddex illaa afar bilood.
Kala duwanaanshaha: heerka caadiga ah ee doofaarku waa 2 xabbo oo sannadkii. Isla mar ahaantaana, tirada celceliska dukaamada ee qashinka waa 11-13 qof. Beerku wuxuu awood u leeyahay in uu xoqdo inta uu noolyahay.
Xayawaankani uma baahna in la tallaalo, waxay mar hore qabaan difaac adag, marar dhif ah ayay jiran tahay.
Si fiican u dulqaad heerarka heerkulka. Suurtogal u ah socodka sanadka oo dhan (dabcan, waxay kuxirantahay goobta taranka).
Cabbirka xajmiga ah ee xayawaankan ayaa kuu ogolaanaya inaad ku keydiso aagga isla markaana ku jiraan dhowr gool oo hal mashiin yar.
Ma jiraan wax dhibco ah oo ku yimaada vislobrew vietnam? Maxay yihiin?
Waxaa jira ficillada aan lahayn cillado this ee doofaarrada this. Miyuu qiimihiisu yahay in la tilmaamo dhowr nuances of daryeelka saxda ah:
Waa lagama maarmaan in lala socdo habka tamarta korontada saxda ah. Maahan lagama maarmaan in la siiyo cunto aan qalafsanayn, ama midhaha gebi ahaanba, waxay si liidata u dheefshiideen, ama haddii kale gebi ahaanba waa la iska tuuraa saxarada. Sidaa darteed, waa suurad wacan in la kariyo boorashka dheer ee laga sameeyo dhulka hadhuudhka.
Waxaad ma dooran kartaa doofaarkan doofaarkan oo leh suurta gal. Haddii aadan ka taxaddarin arrintan, markaa waxay u badan tahay in xayawaanka ay xanuun noqon doonaan.
Qaybaha doofaarka visieti ah ee doofaarka la jabiyay ayaa aad u daryeeshaa carruurtooda, xittaa aad u daryeesho. Waxay quudiyaan doofaarrada ilaa ay ka joojiso. Tani waxay keenaysaa daalkooda. Iyadoo lagu saleynayo tayadaas shimbireed, waa in laga soo daayo dukaamada laga bilaabo da'da laba bilood.
Waa maxay sifooyinka noocaan ah ee doofaarka?
Noocyada qaarkood waxay kala duwanyihiin vislobrew-ka Vietnamese ee ka soo jeeda dabiiciga ah. Inta badan sababtoo ah faa'iidooyinkaas, tani waxay heshay qayb ka mid ah:
Xayawaan degdeg ah oo xayawaan ah. Boarsaradu waxay diyaar u yihiin taranka laga bilaabo 6 bilood, iyo doofaarka - laga bilaabo 4 bilood horeba.
Daryeelka loogu talagalay doofaarka ilmaha dhashay waa mid aad u yar, tan iyo beertu waa hooyo mas'uulka ah. Waxay u muuqataa inaysan kaar noqon doonin, xitaa in ka badan sidaa daraadeed waxaa jira cunugeeda. Marka la eego mulkiilaha, sidoo kale waa saaxiibtinimo.
Doofaarka fiiqan ee Vietnam waxaa laga helaa difaac adag. Ku dhowaad ma xanuunsanayo masiibooyinka cimilada. Waxay u dulqaadanayaan kuleylka adag iyo cimilada kulul. Kaliya qoraallo ayaa burburiya iyaga, gaar ahaan doofaarrada yaryar.
Miyay tahay tirooyinka sare ee waxqabadka sare ee Vietnam?
Maalmahan, naas-nuujinta Vietnamwaa aragtida doofaarka la jabiyay ayaa aad u balan qaadaya. Doofaarradan uma baahnid daryeel gaar ah, quudin qaali ah, maaha mid xamaasad leh. Haddii aad marka hore dooratid doofaarka saxda ah, markaa daryeel iyo daryeel dheeraad ah ma keenayso wax dhibaato ah.
Haddii aad iibsato doofaarka caafimaadka qaba, ka dib markaa 9-10 bilood ka dib, si taxadar leh u daryeel, 100-110 kg doofaarka ayaa kori doona. Xilligaas ka dib, kororka cufku ma kordhin doono si weyn. Muddadan, kaliya qiyaastii 300 kiilogaraam oo hadhuudh ah ayaa la quudin doonaa.
Hilibka Vietnam ah ee aragtida ah ee qarxa doofaarku waa mid dhadhan fiican leh, aad u jilicsan. Gaar ahaan hilibka wanaagsan ee hilibka shakhsiyaadka culeyskiisu yahay 45 kiilogaraam. Suuqyada badanaaba waxay helayaan 100 boog oo hilib ah. Thanks to this oo dhan, hilibka ee taranka la tilmaamay ee doofaarrada ayaa kasbaday kalsoonida macaamiisha.
Waxaan heleynaa faa'idada ugu sarraysa ee ku haboon daryeelka
Daryeelka doofaarka vislobrew ee Vietnam wuxuu keenaa ugu yaraan dhibaatada ugu raaxaysiga ugu sareeya (marka la barbardhigo noocyada ugu caansan fasalka). Haddii hore marka aad ku kalsoon tahay si aad u daryeesho hargab fiican, markaa xaddiga daryeelka ayaa yareyn doona.
Cabbirka xajmiga ee xayawaanku wuxuu badbaadin karaa aagga pigsty. Waxaa lagu talinayaa in laga dhigo leben, si loo daboolo dabaqa.
Waa muhiim in qaybta dabaqa ah ee doorka "qolka jiifka" (tani waa qiyaastii 2/3 qaybta), waxaa lagu daboolay iskudhaf alwaax. Qaybtan tufaaxa ayaa si gaar ah u khuseysa cimilada qabow.
Qeybta inteeda kale waxay noqon doontaa musqusha iyo meel lagu quudiyo.
Doofaarka visifubry ee Vietnam xayawaan aad u nadiif ah Marnaba uma oggolaan doonto in ay u kala qaybiso digada guud ee baadiyaha.
Doofaarada ee caanaha this ma qodo jinsiyada, taas oo si weyn u fududaynaya nolosha milkiilaha. Hal qalin oo ku dhow 5m2 wuxuu dhigi karaa laba doofaar oo qaangaar ah ama mid doob ah, ama mid ku beeri leh doofaarrada.
Marka la diyaariyo qaab-dhismeedka gudaha ee qalimaanta, waxaa lagama maarmaan ah in laga baxo meelaha u dhaxeeya. Waxay u baahan yihiin si ay u awoodaan inay si ammaan ah u gudbaan qulqulka, ururinta saxarada.
Waxaa haboon in la daryeelo hawo wanaagsan oo ka mid ah doofaarka, iyada oo aan doofaarku inta badan ku xanuunsadaan. Waa inaad sidoo kale dhisto daaq yar oo ku yaal aaga lugeynta. Waxay ka ilaalinaysaa qorraxda iyo roobka.
Xaalad khasab ah oo ku saabsan dayactirka this ee doofaarradu waa socod. Hawo cusub, gaar ahaan xilliga diiran, waxay kordhisaa difaaca jirka iyo niyadda.
Waxaa sidoo kale lagugula talinayaa in lagu aaso dhowr calaamadood oo ku yaal aaga lugta, oo ku saabsan digaagga la tuuri karo, iyo qodo "barkad" oo ah wasakh. Socodka joogtada ah, doofaarku waxay yeelan doonaan miisaan iyo xanuun yar.
Cunto si haboon loo sameeyay - furaha koritaanka xayawaan caafimaad leh
Haddii cuntada si habboon loo habeeyey oo si sax ah loogu hoggaansamo, markaa taasi waxay si cad u ballanqaadaysaa caafimaadka xoolaha, miisaan wanaagsan, iyo sidoo kale tayo sare leh, hilib caato ah. In this dhalashada doofaarrada, hungurigu leeyahay qaab dhismeed gaar ah.
Cuntada waxay ku socotaa habka dheef-shiidka si dhakhso ah, maxaa yeelay faleebada yar yar iyo dhexroorka xiidmaha waa yar yahay. Sidaa daraadeed, adkaanta jajaban oo aan loo baahnayn.
Daawooyinka caadiga ah ee vislobrews vietnam waa cawska cawska ee qoyska legume (dhir, alfalfa). Laakiin kuwan waa kuwa caadiga ah ee doofaarka caadiga ah (xididdo caws, caws engegan) ma noqon doonaan wax loo isticmaalo vislobryuhim vietnam. Waxaa lagula talinayaa in si joogta ah u caydhin leh oo isku dhafan oo isku dhafan ama dufan ah.
Quudinta isku dhafan waa in lagu xushaa salka suuf iyo shaciir. Waxaad ku dari kartaa digir, miro, galley. Corn, jidka, waa in aan lagu xadgudbin.
Xaqiiqdu waxay tahay in siriyadan ay wax ka tarayso cayilka, oo sidoo kale ka dhigaysa hilibka hilibka. Faytamiin dheeri ah ayaa sidoo kale saameyn togan ku leh caafimaadka doofaarka. Ku cashada cuntada, waxaad ku dari kartaa caanaha, ukunta, karootada, bocorka. Diirarka - saliidda kalluunka. Haddii aad doorbideyso inaad bixiso khudaarta la kariyey, ka dibna waa inaad karisaa si dhakhso ah intaadan quudin.
Sidee ayay xayawaanka ugu badan ee doofaarka vieta tagaan?
Sababtoo ah xaqiiqda ah in qaangaadhka ah ee taranka waa vislobryushie Vietnamese, waxay timaadaa goor hore, habka dharka uurka ah ayaa loo ogolaan karaa goor hore. Ha ka baqin in uur-qaadid hore ay si xun u saameyn doonto caafimaadka faraca ama horumarinta doofaarka.
Xaaladda ugu muhiimsan iyo tan ugu muhiimsan ee muuqaalka ilamaha caafimaadka leh waa la'aanta jahawareeriga dhirta iyo kalluunka. Haddii kale, muuqaalka cudurka, daciifka iyo doofaarrada doofaarku waa suurtagal.
Waa suurtagal in la barto in doofaarku uu muujiyo ugaarsiga calaamadaha soo socda: waxay diidi kartaa cunista, waxay noqonaysaa degenaansho la'aan, dheecaan u muuqda, wareegga xubinta taranka ayaa kor u kaca.
Ugu dambeyntii, in aad ku qancisid inaadan qaldanayn, waxaad gacmahaaga ku tiirsan kartaa croup, haddii ay qaboojiso oo aan ka tagin goobta, ka dibna waa suurtagal. Haddii ay baxdo, ugxantii weli ma iman.
Uurka wuxuu socon karaa saddex bilood, saddex toddobaad iyo saddex maalmood (114-118 maalmood).
Dhowr maalmood ka hor intaan la furin, doofaarku wuxuu bilaabi doonaa inuu burburiyo caws, si uu buulka uga dhiso.
Maalin ka hor muuqaalka digaagga, dufka ayaa u muuqda ibta. Dhererka waa in si fiican loo saaraa, ugu badnaan la jiifsaday hay ama caws. Haddii qolku aad u qabow yahay - siinta kuleyl dheeraad ah.
Waa lagama maarmaan in la joogo xilliga baaritaanka. Ka dib muuqaalka kalluunka, ka saar bareerka neefsashada ee xabada oo ku rid hilibka qalajinta.
Waa muhiim! Saacadda ugu horeysa ee nolosha, doofaarka waa in ay ahaato mid ka mid ah qaybta lagama maarmaanka ah ee dambarka. Waxay ka kooban tahay dhammaan walxaha nafaqada ugu qiimo badan ee lagama maarmaanka u ah koritaanka dheeraadka ah.
Marka hore, doofaarka waxay cunaan caanaha hooyada oo keliya, sidaa daraadeed waxay si dhakhso ah u koraan miisaanka. Maalinta 10-aad ee nolosha, doofaarka caafimaad leh ayaa miisaamaya, celcelis ahaan, 1 kiilo, iyo maalintii 20aad - 1.5-2 kiilo garaam, bishii - 2.5-3 kilo.
Maalinta tobnaad, waa inaan bilaabnaa sii digaagada biyo nadiif ah. Usbuuca labaad ee nolosha, waxaad si tartiib tartiib ah u siin kartaa dhuxul, jeeso, walxo buuxa leh calcium iyo fosfooraska.
Intaa waxaa dheer, waxaad ku deyn kartaa boorash dheer. Muddo bil ah, doofaarku waa inay bartaan inay si buuxda u cunaan cunto, sababtoo ah waa bil ka dib in qadarka caanaha laga bilaabo hooyadu bilaabayso inay hoos u dhacdo. Waa in si tartiib tartiib ah looga saaro hooyada.
Marka ugu horeysa, ubaxa waxay u badan tahay in ay soo saaraan qiyaastii shan doofaar, iyo in ka badan wakhtigan waxaa lagu gaari karaa 20 qof. Doofaarada ubaxyada waa mid aad u nadiif ah, si kastaba ha ahaatee, sida hooyada. Waxay si joogta ah u joogaan meel hal meel ah, ha dhicin sagxadaha, ha qodin cawska.
Dabeecadooda waa deganaansho iyo sharaf leh. Waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo kuwa yar yar 1-2 maalmood (fiitamiinada iyo birta). Tallaaladani waxay ka hortagi doonaan dhiig-yaraanta. Maaddaama xayawaanka lagu sharraxay ay kala duwan yihiin caafimaadka khaniisiinta ah, mustaqbalka, tallaalku ma noqon doono lagama maarmaan.